Baarlamaanka Carabta oo ku baaqay in dib loogu laabto wadahadallada | KEYDMEDIA ONLINE
Baarlamaanka Carabta oo ku baaqay in dib loogu laabto wadahadallada
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jaamacadda Carabta, Adel Al-Asoumi, ayaa ku baaqay in muranka doorashooyinka ee ka taagan Soomaaliya, lagu dhameeyo miiska wadahadalka.
QAAHIRA, Masar - Baarlamaanka Jaamacadda Carabta, ayaa Jimcaha maanta ah ugu yeeray hoggaamiyayaasha Soomaalida in ay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka, si heshiis loo dhan yahay looga gaaro doorashooyinka qaranka.
Bayaan, ka soo baxay afhayeenka Baarlamaanka Carabta, Adel Al-Asoumi, ayaa si weyn loogu nuuxnuuxsaday muhiimadda wada xaajoodyada, iyo helidda jawi deggen, si kor loogu qaado amniga iyo xasilloonida Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale ugu baaqay wadamada Carabta inay garab istaagaan Soomaaliya, kana caawiyaan sidii ay uga gudbi lahayd caqabadaha jira.
Baaqyada ka imaanaya dibadda ayaa, joogto noqday, waxaana si guud Madaxda Dowladda Fadaraalka iyo kuwa Maamul Goboleeyada, loogu booriyay in ay dib u billaabaan wada hadallada.
Diidmada dibadda iyo gudaha ah ee ka dhanka ah muddo kordhinta uu Golaha shacabka Farmaajo u sameeyay ayaa sababtay inuu dhawaan u ambabaxo dalka Congo DR, si u uu weydiisto, taageero, iyo galaangal siyaasideed oo lagala raadiyo Midowga Africa, waxayna taasi u muuqataa mid uu ku hungoobay.